Ingabe umcabango wethu ukudala i ngokoqobo umgomo? Uma singakhonzi uzibophezele imilingo futhi bemilingo, ulinde zonke izinyawo etholakalayo emhlabathini, bekholelwa ngokwabo materialists, uphendula umbuzo, siba semathubeni wokuzilimaza ithi ezibangelwa ngenhla - akukho. Kulokhu, impikiswano yethu eyinhloko kuyoba ulwazi lwesayensi, owawuthi ngokoqobo umgomo - lena yinto ekhona ngokuzimela lethu, ingqondo yethu futhi umcabango.
Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi ngaphambili indlela ngamehlo engqondo ipotimende eligcwele imali, wangafika. Kakhulu ukuthi singenza ngokusebenzisa umcabango - ke kwenzelwe nje zokucabangela ukudala izithombe, kuhlanganise uhlamvu kumnandi. Ukuze umcabango wethu ukwakha okuthile enyameni, kumelwe usebenzise izandla namathuluzi efanele.
Konke ibonakala ngakho, kodwa uma ekumbeni ujule, kubukeka ngisho simple njengoba kungase kubonakale efika kuqala. It kuvela ukuthi zikhona izenzakalo elibanzi yangempela ukuthi sakha kuphela amandla emcabangweni wakhe.
Cabangela ezinye izibonelo ezichaza kabanzi ezithathwe, mina ngizoqala ne izenzakalo of isikali cosmic - imilaza. Uma uthi nhlá, kubonakala sengathi izinto umlaza - kukhona izenzakalo okufanele khona ngokuzimela lethu njengoba isihloko engazi. Kodwa uma sihlola ngokucophelela inqubo ngokwanele umbono ezinkanyezi, siyaqaphela ukuthi ngesisekelo zonke nemilaza kuyinto emcabangweni yethu. Uzenzela: zonke umlaza esibhakabhakeni - inombolo ethile izinkanyezi, zixhunywe imigqa iplanethi ukuhlelwa ethile.
Imizila ukuthi ukuxhuma ezinkanyezi iKhima, akunakwenzeka ukuba abantu bazibonele bona, ungakwazi nje, noma ukucabanga. Ngakho-ke, ukuze ubone iKhima, akwanele ukumane nje ukubuka, kubalulekile, ngakolunye uhlangothi, amandla emcabangweni, futhi ngakolunye uhlangothi, kumelwe futhi kubafundi bezinkanyezi noma kwabasebenzelana astronomy oqeqeshiwe. Phakathi Kuceceshwa lesikutfola ubuka imidwebo amaqoqo ezinkanyezi, ngekhanda izithombe zabo ezibukwayo, okuyizinto ke, lapho ibeka Kulobo busuku obucwathile, angesabi kuphakama ezingqondweni zethu. Ngakho, abangenalo ikhono emcabangweni engazi kubafundi bezinkanyezi noma kwabasebenzelana astronomy, awukwazi ukubona imilaza. Kulokhu, sithanda ukubona cluster elula esingalawuleki amachashazi elikhanyayo - izinkanyezi, futhi akukho okunye.
can iyiphi umlaza kanjani? Ngokusobala, endulo, ezingqondweni a ngezinkanyezi lapho Sky Okubukwe kwavela izithombe ngengqondo ezibukwayo okuhlotshaniswa ukuthi noma esinye isidalwa yangempela noma wasenganekwaneni. Lezi zithombe amagama athile banikwa, bese kubo okwenziwe ngaphandle ubufakazi obunengqondo abhula ngezinkanyezi attribute izimfanelo ezithile futhi izakhiwo. Capricornus kuchasiselwe izinga abanye, umlaza ka Sagittarius - nezinye. Planet Mars udumo izimfanelo wesilisa kanye iplanethi Venus - zesifazane. Ngakho kwaba khona yokufakelwa, izwe ngengqondo lapho izinkanyezi nemilaza babe "ukuphatha" izwe zethu ezibonakalayo, ezithinta isiphetho of abantu nezizwe.
Ngaphezu okungenhla, singasho ukuthi umcabango wethu kudala ngisho anjenge omkhulu wamanzi efana izilwandle, kusukela empeleni azikho imingcele, okwakuyoholela ukwehlukana izilwandle ku izilwandle ehlukile. Yonke imingcele kukhona umcabango kuphela abantu. Kuyinto ngokwanele ukubheka ibalazwe. Ngezansi, isibonelo, elibonisa imingcele zasePacific Atlantic izilwandle.
Ngo isibonelo esilandelayo sicabangela umgomo onjalo imihlola aziwayo njengoba ukuphuma nokushona kwelanga. Uma uthi nhlá, kubonakala sengathi kithi ukuthi lezi zenzakalo lwemvelo ngokuzimele ukuqaphela kwethu. Kodwa eqinisweni akusiyo. Cabanga izingqapheli abathathu koyedwa futhi ngesikhathi esifanayo, funa ilanga e amaphuzu amathathu ahlukene isikhala.
Umuntu othile wake wabuka, ngenkathi, isibonelo, eJapane, abone kwelanga. Enye obukele, kuyilapho e-Europe, kuyilapho ngesikhathi esifanayo ungabona kwelanga. A ingqapheli lwesithathu, ngenkathi, isibonelo, isikhala esijulile, ngeke ngesikhathi esifanayo ukubona ilanga, okuyinto ngaphandle inqubo kwelanga noma kwelanga.
Kusukela Sun ngokwako akukwazi kwelinye futhi ngesikhathi esifanayo babe uthi ezintathu ezingqubuzanayo, kuvela ukuthi ukuphuma nokushona kwelanga mkhuba ukhona kuphela ngokugxilile ezingqondweni nasezinhliziyweni umcabango ababebukele etholakala amaphuzu ezahlukene emkhathini. Ngakho, ngaphandle kolwazi kwalokho esikushoyo kungase kungabi buyinto umgomo - kwelanga noma kwelanga.
Ngokubona kwami, okungenhla kwanele ukwenza lesi yisiphetho esinengqondo ukuthi umcabango wethu kungaba ezimweni ezithile, ukudala i ngokoqobo umgomo. Uma othile akwanele, ungaya phambili futhi alethe ubufakazi more xaka, esekelwe isayensi eyaziwayo amacala engqondo "ukungaboni". It kubonakala isimo nakuba ukuthi sikuye esithile thina awuboni yini ukubukeka, yizwa hhayi lokho silalela, ungazizwa ukuthi yini ethinta, njll Ngicabanga ukuthi wonke umuntu owake ihlangabezane simanga, njengoba kunjalo, isibonelo, esekelwe namasu, inkohliso, ukukhwabanisa, njll icala Akwaziwa kukhona lwesayensi, uma umdlalo izilaleli basketball wangabona indoda egqoke isudu inkawu, naphezu kweqiniso lokuthi ngezinye izikhathi saphelelwa enkundleni yemidlalo futhi emkhakheni buka izilaleli.
Kuzo zonke lezi zimo, sisangulukile physiologically isebenze kahle, kodwa engekho ngenxa yanoma yisiphi isizathu, ikhono ukwakha isithombe esinento noma mkhuba. Ngo isayensi, lesi simanga ibizwa ngokuthi "inattention ubumpumputhe" noma "ukungaboni okuqonda". Kukholakala ukuthi ukungakwazi ukuba banake into ingeyona izinkinga umbono futhi luyingxenye ngokwengqondo.
Cabangela ezinye izibonelo. Cabanga, ikakhulukati, izenzakalo inhloso, efana ibhola noma chess.
Uma uthi nhlá kungase kubonakale sengathi ukuze ubone umdlalo, thina kuphela kudingeka okubuka okulula. Empeleni akunjalo. Kunezimo lapho singabheka umdlalo, kodwa abazibonanga wakhe. Ukuze siqonde ukuthi kungenzeka kanjani lokhu, ake isimo lapho asazi imithetho ibhola noma chess.
Ngokusobala, kuleli cala, sizobona abantu egijima zinqamule insimu, noma ukuma phezu ibhodi chess izicucu, kodwa lo mdlalo, ngeke babone kuze kube yilapho ke, uze ukuqonda imithetho yalo mdlalo. Lokhu ngiyazi mina, ngoba mina lo "esingabonakali" umdlalo namanje baseball. Lapho ngibuka lo mdlalo, Angikwazi nje ukubona abadlali ukushaya ibhola ngenduku, futhi labo Ubamba ibhola. Kodwa angiboni ukuthi umdlalo, ngoba abaqondi essence yayo, okuyinto imithetho yomdlalo.
Ngakho, ukuze ubone i-baseball, ibhola, i-hockey, njll, kubalulekile ukuba ningabi nje kuphela obona kahle, kodwa futhi ulwazi imithetho yomdlalo. Ngakwelinye ihlangothi, imithetho ingabonakali ngombono esilula lesi sidinga ukusebenzisa umcabango, okuyinto ukwakha isithombe zokucabangela lapho abadlali (chess izingcezu) zikhiqizelwa zamaqembu ehlukene, futhi umdlali ngamunye (sibalo) ubonakala umsebenzi walo. Ngendlela efanayo sibona umgomo zokucabangela yomdlalo - lokushaya noma ukubeka mate abaphikisi.
Ngakho, ngo-Iqiniso eliphelele liwukuthi abantu ungasho ukuthi ngomqondo ovulekile kukhona kuphela umdlalo lapho abadlali imisebenzi bangakwazi ukucobelelana ngobuhlakani nangamandla "avuselele" mithetho. Futhi uma abadlali ngokuvamile kakhulu wephule, isibonelo, imithetho umdlalo, lo mdlalo ngeke. Kulokhu, enkundleni yomdlalo webhola, izoqalisa abadlali, kodwa ibhola uqobo kuyobe kungasekho. Kuyefana nasendleleni yimuphi umdlalo.
Kule kubonakala ukuthi umcabango kuyadingeka, ngakolunye uhlangothi, ukuze udale imihlola inhloso, ngakolunye uhlangothi - ukubabona. Uma kungekho umcabango, ayikho indlela ukwakha isithombe ezibukwayo noma ukumelwa.
Ngakho-ke, ubumpumputhe yengqondo ngokuyinhloko ebonakaliswa izingane, njengoba beye benza iqala kuphela ukuthuthukisa ezinonembeza nekhono ukudala izithombe ezithile.
Njengomthetho, izingane ungayiboni abadala, nibafundise baze bathole ulwazi olufanele. Ngokwesibonelo, izingane ezingaphansi kweminyaka ethize yobudala akanakuwubona iwashi njengento, ngisho noma ukubheka kwabo. Iqiniso lokuthi abanayo okwamanje isithombe ezifanele futhi imiqondo ezingaba okuwukuphela kwayo enqubeni yokufunda kanye intelligence kunesidingo.
Lapho ingane ekugcineni uzobona iwashi njengento, abahlukanise kusuka ngemuva, kuba ukuba ebudaleni obuthile kuphela, abakwazi ukubona isikhathi, ebonisa amahora, ngoba akanayo kodwa ulwazi oludingekile, okuyinto kubonakala ikhono ukucabanga esizayo. Phela, akunakwenzeka ukuba sizibonele ngawethu.
Uma ingane akusho ngisho kudingeka ikhono umcabango, ukuthi akukho ukuqeqeshwa ngeke bamhole bamyise umbono isikhathi. Uthatha nje ingqondo ayikwazi obumba izithombe ezidingekayo engqondweni. Lokhu kuyisizathu esenza ukuba ingane, sibonelo, singasetjentiswa ukudlala ngokungesabi ne amabhomu, wamshaya emlilweni. Iqiniso ukuthi akakuboni amabhomu, ngoba akasafuni ngisho nolwazi olufanele kanye isithombe ezibukwayo. Ubona kuphela ezinye uhlobo into ezithakazelisayo futhi akukho okunye.
Kungenzeka okufanayo nabantu ubudala, njengoba beye benza kwezinye izimo, ikhono ukwakha ebukwayo kanye imiqondo, futhi eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe lezi zithombe futhi imiqondo, kuya kuba nzima nakakhulu ukwakha imiqondo yabo. Singasho ukuthi ngenxa yalokhu kukhona komqondo senile, lapho indoda, naphezu umbono omuhle, ukuzwa, njll, ayisekho okunenjongo ukuze abone ukuthi phambilini kulula ukubona ukuthi iyini. ukwazi lokhu womuntu phansi, futhi kungashiwo, it is kancane kancane kuphenduke ingane. Yonke imiphumela olandelayo.
Kubantu abadala, abantu abanempilo njengoba isimo yobumpumputhe engqondo. Futhi kubonakala ubuhlobo phakathi kwamadoda nabesifazane, njengoba kukhona ubumpumputhe engqondo ngokuvamile zesifazane, futhi kukhona ngokuvamile amadoda, lapho ezinye izinto nemicimbi ngokushesha futhi kalula ukuhlukanisa (bona) amadoda, futhi abanye besifazane. Lokhu kungenxa yokuthi i-scope nekutfutfuka kwelizinga amadoda acabange futhi abesifazane akhiwa ehlukile futhi ingase ibe khona ehlukile ngandlela-thile. Lokhu kwaba sobala ikakhulukazi ekuqaleni, lapho owesilisa nemfundo lensikazi ngokuyisisekelo ukuhluka nomunye. Ngakho-ke, amadoda ngokuvamile bayamangala lapho ebhekene izimpumputhe wesifazane ezindabeni eziphathelene, isibonelo, izimoto, izikhali noma ezemidlalo. Abesifazane, kunalokho, bayamangala abantu abaningi kanjani childishly izimpumputhe futhi ngingakazi lutho ezindabeni eziphathelene, isibonelo, imibala izingubo, ubucwebe, njll
Lokhu zingachazwa ngezinqubo yokuthi amadoda, njengoba umthetho, azikho izithombe eziningi ezibukwayo, okuyizinto abesifazane, futhi okuphambene nalokho. Ngokwesibonelo, iningi lamadoda, ucabangela orchid, Cattleya, ngeke usibone njengoba ezingqondweni zabo, cishe, akukho elihambisana nesithombe ezibukwayo. Ngakho-ke, ukuthi bazobona kuphela lokho ine umqondo - nje izimbali. Ngakolunye uhlangothi, abesifazane abaningi ngeke babone Mercedes GLR ekilasini, ngoba awunawo oyifunayo image okubonakalayo. Ziyakwazi sibonwe nje imoto. Abanye babubona Mercedes, ngolwazi lonke uhlamvu owaziwa. Ngaphandle kwale uhlamvu, ngiyacabanga, abanye besifazane abakwazanga ukunikeza nencazelo efanele yegama imoto.
Lokho kusho ukuthi, ukuze ubone ngokoqobo umgomo ngesimo, isibonelo, i-orchid noma imoto, udinga ikhono emcabangweni ukutholakala kwezithombe kudingekile ezibukwayo. Ngaphandle kwalokhu, singabheka noma iyiphi inombolo into, kodwa awuwuboni.
Ngokombono wami, lokhu kwanele, ngakolunye uhlangothi, ukwenza isiphetho esinengqondo ukuthi ikhono umcabango ungenza ezimweni ezithile, empeleni umgomo. Ngakolunye uhlangothi, kumele kuphetfwe ukuthi ukukhohliseka umgomo kukhona ezinye ukulungisiswa ukuze kubhekwe umqondo wabo ngemibono of semthethweni.
Bryansk esifundeni: labantu, abaphathi, umnotho, umkhakha
Ithambo emathanjeni. Iresiphi yokupheka
ASEAN - ke ... ASEAN amazwe: uhlu imisebenzi kanye injongo